DandyLoop: Kekọrịta Ndị Na-ere Ntaneti N'etiti Storelọ Ahịa | Martech Zone
DandyLoop: Kekọrịta ndị na-azụ ahịa ọnlaịnụ n’etiti ụlọ ahịa
Saturday, December 6, 2014 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Omume a na-ahụkarị n'ọtụtụ ubi n'ịntanetị bụ imekọ ihe ọnụ n'etiti ụlọ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ n'ọhịa ahụ, nnukwu ma ọ bụ obere. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị na ngwa mkpanaka, n'ịgba egwu n'ịntanetị, na ọdịnaya vidiyo, na n'ezie na saịtị ọdịnaya. Na saịtị ọdịnaya anyị na-ahụ nkwanye ọdịnaya nke ọdịnaya n'etiti saịtị, ọbụlagodi mgbe ha na-asọmpi. O siri ike ịchọta ndị isi na-agaghị akwado omume a. Na agbanyeghị, ọ chọrọ ntozu oke tozuru etozu site na ụlọ ọrụ ndị dị n'ọhịa - ha kwesịrị ịghọta na ịkekọrịta abụghị otu ụzọ inye ihe, kama ọ bụ ụzọ abụọ - onye ọ bụla na-enweta mmeri.
N'agbanyeghị na anyị nọnyeere anyị kemgbe mmalite nke ịntanetị, ọ bụ naanị n'afọ ndị na-adịbeghị anya ka ụlọ ọrụ eCommerce malitere ịme onwe ya ọchịchị onye kwuo uche ya. Mmụba nke ngwaọrụ SaaS mere ka ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị mepee, taa enwere ihe karịrị 12m. Otu ihe na-efu ebe a bụ omume nke imekọ ihe ọnụ: a na-echekwa ụlọ ahịa ahụ na usoro ahịa azụmaahịa dị oke ọnụ, ma ha na-achọ ụzọ ọhụrụ iji ruo ndị ahịa aka - mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ otu, yana afọ ojuju. Ugbu a, ha achọpụtala na imekọ ihe ọnụ bara uru, ma ha enweghị otú ha ga-esi eme ya.
Omume kachasị mma maka imekọ ihe ọnụ n'etiti ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ isi ahịa ha - na-ere ngwaahịa. Ozugbo ụlọ ahịa abụọ metụtara ya kpebiri ịkwado na ịkwado ngwaahịa nke ibe anyị, anyị na-ahụ CTR nke dị elu karịa ihe ọ bụla ọzọ anyị maara na ahịa ọdịnala (karịa 7% na nkezi). Nke a bụ n'ihi na n'adịghị ka ọtụtụ ahịa ọdịnala - ebe a uru onye na-azụ ahịa dị adị - nke a bụ ihe ọ na - achọ mgbe ọ na - azụ ahịa.
DandyLoop na-enyere omume nke imekọ ihe ọnụ site na iji usoro nkwekọrịta maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ebe ụlọ ahịa ọ bụla nwere ike ịchọpụta ma kpọọ ụlọ ahịa ndị ọzọ ka ha sonye, ​​nke pụtara na ha ga na-atụnye ọnụ na ngwaahịa nke ibe ha. Nke a na - aga n'ụzọ ọzọ - enwere ike ịchọpụta ụlọ ahịa ọ bụla ma kpọọ gị na ndị ọzọ. Ha nwere ike ijikwa ọrụ netwọk ha ma nyochaa arụmọrụ onye ọ bụla.
Nkwado a dabere na ịha nhatanha, ọ bụ ebe ahụ ka algorithm anyị ji achịkwa - maka onye ọbịa ọ bụla nke ụlọ ahịa nyere otu n'ime ndị mmekọ ya, ọ ga-enweta ọhụụ ọhụụ. 1 maka 1. Nke a bụ ihe pụrụ iche na ụwa eCommerce: ndị ahịa anyị anaghị ere ahịa ire ahịa maka ego, ha nọ na azụmaahịa nke ire ngwaahịa - nke ahụ bụ ihe anyị na-enye - ọtụtụ okporo ụzọ, ndị ọbịa na ahịa ndị ọzọ.
Ugbu a beta maka Shopify ndị ọrụ, DandyLoop awade zuru achịkwa gị na-atụ aro na ngwaahịa, uzo akụkọ na ngwa na mfe Mbido!
Tags: dandyloopnkwalite ecommerceụlọ ahịannabata ndi obia
Ebumnuche 5 iji kwado Hlọ Ọrụ Digital Marketing